Dadka beera qaadka ayaan lacago ka helin, laakiin waxa ganacsiga qaadka ka taajira dadka beeralayda ka iibsada ee sii iibyaa.
Warkan oo ay shaaca ka qaaday hayad aan dawli ahayn oo kuwa samafalka ah oo Catholig ah oo la yidhaa Caritas ayaa waxaa lagu sheeggay in ganacsiga qaadka oo ay sanad walba ka soo baxdo lacag dhan malaayiin dollar aanay waxba ka bedelin nolosha deegaamada uu qaadku ka baxo.
Sida ay ku soo warantay wakaalada wararka ee Faransiiska ee AFP oo warbixintan ka soo dirtay degmada Meru ee ku taalla badhtamaha dalka Kenya,soona xiganaysay hayad kuwa gargaarka ah oo aan dawli ahayn oo Catholig ah oo la yidhaa Caritas ,degmada Meru oo xudun u ah beeritaanka qaadka ayaa ah mid aad u sabool ah oo sida ay hayadaasi sheegtay malaayiinta Doolar ee ka soo xeroota iibka qaadku aanay gaadhin qoysaska halkaasi ku nool.
Hayadaasi Caritas ayaa waxaa ay sheegtay in ay taasi ugu wacan tahay qiimaha qaadka oo aanay beeralaydu goynin ee laakiin ku xidhan dad aad u tiro yar oo isugu jira Keenyaan iyo Soomaali.
Hayada Caritas waxaa ay sheegtay in ganacsiga qaadka ay sanad walba ka soo xerooto malaayiin Dollar,qaadkaasi oo loo diro wadanka Somalia iyo dalka Britain oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee qurba jooga ahi.
Hayadu waxaa ay sheegtay in caruurta ku nool deegaanka uu qaadku ka baxo ee Meru ay dugsiyada kaga tagaan toban jiro iyaga oo markaasi ku biira dadka qaadka soo gura
Hayadan Caritas waxaa kale oo ay walaac ka muujisay in ay dadka beeralayda ah ee deegaankaasi ay ku xidhan yihiin uun beeritaanka qaadka ,waxaana ay sheegeen in ay isku dayaan in ay beeralayda deegaankaasi ay ku qanciyaan in ay waxyaabo kalena ay beertaan si ay uga badbaadaan is-bedbedalka ku yimaadda qiimaha qaadka la kala siisto.